Winrar 3.9 ပါ Crack ပါ တစ်ခါတည်း ထည့်ပေးထားပါတယ် . ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ ဖိုင်တွေ link သေနေရင်လဲ သတိပေးပါဦး . တစ်ချို့ဖိုင်တွေ လင့်သေနေတာ ပြန်မပြင်မိတော့ နောက်ထပ် လာ Download လုပ်ကြတဲ့သူတွေ ကျတော့ အဆင်သင့်မဖြစ် မှာစိုးလို့ပါ . ကျွန်တော် nyinaymin.net ကနေ ထပ်တင်ပေးပါဦးမယ် .
ဖိုင်ကို ချုံ့မယ် ၊ ပြန်ဖြေမယ့် အလုပ်ကိုလုပ်ပါတယ် . ပြီးတော့ ဖိုင်တွေကို ခွဲထုတ်ဖို့အတွက်လဲ သုံးပါတယ် . ဒီမှာ ရေးခဲ့ပြီးသားပါ ..
Download ifile.it ၊ DL mediafire ၊ Download multiupload
ကဲ ဒါလေးကတော့ အသစ်စက်စက်ကလေးပါ . အထဲမှာ တစ်ခါတည်း notepad နဲ့ ရေးပေးထားပါတယ် . မသေချာမှာစိုးလို့ တစ်ခါတည်းရေးပေးလိုက်ပါတယ် ... အရင်ကလဲ ပေးခဲ့ ဖူးပါတယ် . ဒါပေမယ့် လိုင်စင်က expire ဖြစ်သွားတယ်ထင်တယ် . အဆင်မပြေတော့ဘူး . အခုဟာကတော့ အဆင်ပြေကြမှာပါ . အဟောင်းး(Folder lock v5.7.2)ကို ပါ တင်ပေးထားပါတယ် . အဆင်ပြေကြမယ်ထင်ပါတယ် . . အဆင်ပြေရာသာ သုံးပါဗျာ . ကျွန်တော်လဲ ရှာပေးနေပါတယ် . Folder lock ထက် ပိုအဆင်ပြေတာ တွေ့ရင်လဲ တင်ပေးပါ့မယ် . စိတ်မပူပါနဲ့ . . လိုချင်တဲ့ program တွေရှိရင်လဲပြောပါ . တောင်းဆိုထားတာတွေကိုလဲ ကျွန်တော် အဆင်ပြေအောင် ပြန်ဖြေပေးနေပါတယ် . .Serial: F6-20090324-9-83264Key: F0CCFECE123E365A98B0A0EE5E08E074804EEEAAF0CEFEEE12082050DEBEF6FEDownload folder lock 6.3Download ifile.it ၊ Download mediafire ၊ Download multiuploadDownload folder lock 5.7.2Download ifile.it ၊ Download mediafire ၊ Download multiupload
The system DLL user32.dll was relocated in memory. The application will not run properly. The relocation occurred because the DLL C:\_Windows\_System32\_Hhctrl.ocx occupied an address range reserved for Windows system DLLs. The vendor supplying the DLL should be contacted foranew DLL.အပေါ်က error ပေါ်လာတဲ့သူများအတွက်ပါ .. ဘာ့ကြောင့် ဒီ error ပေါ်လဲဆိုရင် window XP SP2 သုံးတဲ့သူများအတွက် xp sp2 က Realtek HD Audio Control Panel ကို လက်မခံတာပါ . ကိုက်ညီမှုမရှိတဲ့အခါ အခုလိုပေါ်ပါတယ် . အဲ့ဒီ့အတွက် microsoft က တင်ပေးတဲ့ ဖိုင်ကို downlaod လုပ်ပြီး ဖြေရှင်းလဲရသလို realtek ကို updating လုပ်တဲ့နည်းနဲ့လဲ ဖြေရှင်းလို့ရပါတယ် ..နှစ်နည်းရှိပါတယ် . ပထမတစ်နည်းက microsoft က တင်ပေးထားတဲ့ ဖိုင်ကို Download လုပ်ပြီး run လိုက်ပါ . Download လုပ်ဖို့အတွက် ဒီကို သွားလိုက်ပါ .နောက်တစ်နည်းက အခုလက်ရှိ သုံးနေတဲ့ realtek ကို update လုပ်ဖို့အတွက် ဒီကို သွားပြီး High Definition Audio Codecs (Software) ကို download လုပ်ပါ ..မလုပ်တတ်ရင် High Definition Audio Codecs (Software) ကို ကလစ်လိုက်ပါ . ပေါ်လာတဲ့အကွက်မှာ I accept to the above ကို အမှန်ခြစ်ပေးပြီး Next ကို နှိပ်ပါ .. ပြီးတာနဲ့ ကိုတင်ထားတဲ့ window ကို ရွေးပါ . ရွေးပြီးတာနဲ့ ဟိုဖက်အခြမ်းက GO Go GO ဆိုတာတွေက download လုပ်ဖို့ link တွေပါ . ပုံနဲ့ မရှင်းပြတော့ဘူး . မနက်ကျမှ ထပ်တင်ပေးမယ် . အချိန်မရှိတော့ဘူး . Office ပိတ်တော့မယ် . Read More
ညီလေး နေဇင်လတ်က မေးလာတာပါ .. အရင်ကလဲ ဘယ်သူလဲ မသိဘူး မေးပါသေးတယ် ရေးမယ်ရေးမယ် နဲ့ အလှည့်မရောက် တာပါ . အောက်က code တွေကို copy ကူးပြီး Page Elements >> AddaGadget ကိုသွားပြီးတာနဲ့ html ကို ရွေးပြီး ကူးထည့်လိုက်ပါ . လိုအပ်တာ တွေကိုပဲ လိုက်ပြောင်းပါ . textarea ကို 25 ပေးထားပါတယ် .. အဆင်ပြေသလို ပေးလိုက်ပါ . ကို့ဆိုက်နဲ့  ကိုက်သလိုပေါ့ ..<center><a href="http://www.nyinaymin.com"><img src="http://img30.picoodle.com/img/img30/2/7/12/nyinaymin/f_referm_8e944a9.gif"/></a></center><textarea cols="25"><center><a href="http://www.nyinaymin.com" target="_blank"><img src="http://img30.picoodle.com/img/img30/2/7/12/nyinaymin/f_referm_8e944a9.gif" border="0" alt="www.nyinaymin.com" /></a></center></textarea>ကဲ အပေါ်မှာ မှင်အနီနဲ့ရေးထားတာက ကို့ရဲ့ ဆိုက်လိပ်စာဖြည့်ရမှာပါ . မှင် ပန်းရောင်နဲ့ရေးထားတာကတော့ ကိုထည့်ပေးမယ့် ကို့ဆိုက်အတွက် ဒီဇိုင်းပုံ လှလှလေးပေါ့ . photoshop ပိုင်ရင်ပိုင်သလို လုပ်လို့ရပါတယ် . နောက်ပိုင်းကျွန်တော် photoshop အတွက် ပုံစံလှလှလေးတွေ လုပ်ပုံလုပ်နည်း ထပ်တင်ပေးပါဦးမယ် . ပေးချင်တာတွေကတော့ အများကြီးပဲ . ဗိုင်းရပ်စ်ရေးသားပုံ ရေးသားနည်းအချို့ရယ် ၊ ဟိုတစ်နေ့က ပြောခဲ့တဲ့ အထူးအစီအစဉ်ရယ် . တင်ပေးစရာ program တွေရယ် . အများကြီးပဲ အခုတော့ တောင်းဆိုတာတွေကို ဦးစားပေးပြီး တင်ပေးသွားပါ့မယ် ..
Local Disk C/D/E အစရှိတဲ့ HDD တွေကို Double Click နှိပ်မရရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
ကျွန်တော့် ကွန်ပျူတာ ဒီနေ့ Disk C:/ D: တွေကို Double click နှိပ်မရတော့ဘူး .. အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ မေးလာတဲ့ ညီငယ်တစ်ယောက်ကို ပြန်ဖြေဖို့ အချိန်မရလိုက်တာနဲ့ မဖြေပေးလိုက်မိတဲ့ အတွက် တောင်းပန်းပါတယ် . အလုပ်အရမ်းများနေတဲ့အတွက် စာမပြန်မိတာပါ . တစ်ခြားသူများလဲ C: နှင့် D: ကို double click လုပ်မရတာမျိုး ကြုံဖူးမှာပါ . အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ သုံးနေတဲ့ HDD ထဲက hidden file လုပ်ထားတဲ့ autorun ဖိုင် ကို virus က တိုက်ခိုက်ထားတာ ခံနေရတဲ့အတွက် Double click လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ... Open နဲ့ ဖွင့်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် လုံးဝမရပါဘူး . အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဆိုရင် အခုကျွန်တော် ပေးထားတဲ့ software ကို Download လုပ်ပါ . အခုပေးတဲ့ Explorer xp ကို run စရာမလိုပါဘူး . အောက်မှာ ကျွန်တော် တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် ရှင်းပြထားပါတယ် . လုပ်ရမှာက လွယ်ပါတယ် .
>>>> အောက်က ပုံ(၁)မှာပြထားသလိုမျိုး . Explorer xp ကို ဖွင့်ပါ . ပြီးတာနဲ့ C:/ D: မှာ တစ်ခုချင်းစီလိုက်နှိပ် C: ကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့ autorun file တစ်ဖိုင်တွေ့လိမ့်မယ် . အဲ့ကောင်ကို ဖျက်ပစ်လိုက် . အဲ့ကောင်က လိုက်ဒုက္ခပေးနေတာ . ရဲရဲသာဖျက် . ကို့မှာ partition ပိုင်းထားတာ ဘယ်လောက်လဲ ပိုင်းထားတဲ့ အပိုင်းတိုင်းမှာ autorun ဖိုင် တစ်ခုစီရှိနေတယ် အဲ့ကောင်တွေကို လိုက်ဖျက်လိုက် . ပုံနဲ့ပြထားပါတယ် . ကြည့်ပြီးလှုပ်ရှားလိုက်ပါ . အောက်မှာ ဖိုင်တင်ပေးထားတယ် . ကဲအောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါဦး ..
swethet14 ; ကိုညီမင်းရေ ...PM hiren , erd comander အဲဒါတွေကဘာလဲ၊ဘယ်လိုသုံးလဲ၊ ဘယ်လိုအကျိူးပြုလဲ သိချင်လို့။အားရင်တစ်ချက်လောက်ဘလောဂ့်မှာတင်ပေးပါလား။Erd Commander 2005 ကို ဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတာ ရေးပေးထားပါတယ် . ဒီမှာ သွားဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ ..
ညီနေမင်းAnswers, မြန်မာ ebooks များ
ကြည်သာ: အကို အော်တိုကတ်ကို မြန်မာလို တင်ပေးပါလား
အဆင်ပြေတဲ့ link ကသာ Download လုပ်ကြပါ .. Auto cad 2002 နှင့် 2005 ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ် .
Download ifile.it ၊ Download mediafire ၊ Download multiupload Autocad 2005
အားလုံးအဆင်ပြေကြမယ်ဆိုရင် ၀မ်းသာပါတယ်ဗျာ ... ကျွန်တော့်မှာ ပေးစရာတွေ အများကြီးရှိပါတယ် . ဖြည်းဖြည်းချင်း ပေးသွားပါ့မယ် .
နေနိူင်: blog အတွက် backup ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာလေး ပြောပြပေးပါအုံး။လုပ်နည်းက လွယ်ပါတယ် .(၁) blogger.com ကို log in ၀င်လိုက်ပါ .(၂) setting >> Basic ကို သွားပြီး ပုံ(၁)မှာလို Export blog ကို ရွေးလိုက်ပါ .(၃) ပြီးရင် ပေါ်လာတဲ့ box ထဲက Download blog ကို နှိပ်လိုက်ပါ .(၄) Save လိုက်ပါ . (တစ်ခါတစ်ရံ Downloader တွေနဲ့ Download လုပ်ရင် .xml ဖိုင်ကို မရတာမျိုးကြုံရတတ်ပါတယ် . အဲ့တော့ သမရိုးကျအတိုင်းပဲ save လိုက်ပါ )(၅) အဲ့မယ် .xml ဆိုပြီးတော့ ဖိုင်တစ်ဖိုင်ရလာပါလိမ့်မယ် .(၆) အဲ့ဒီ့ရလာတဲ့ ဖိုင်ကို ကို Import လုပ်ချင်တဲ့ ဘလောဂ်ကို ဖွင့်လိုက်ပါ .(၇) setting >> basic ကိုသွားပြီး Import Blog ကို ရွေးလိုက်ပါ .(၈) အခုနက ရလာတဲ့ .xml ဖိုင်ကို ရွေးပါ။ automatic public blog ကို အမှန်ခြစ်ပေးပါ။ သူပေးထားတဲ့ code ကို ရိုက်ထည့်ပြီး Import Blog ကို နှိပ်လိုက်ပါ .ကဲ အဆင်ပြေပါစေဗျာ ..အောက်မှာ ပုံနှင့်ရှင်းပြထားပါတယ် . Read More
kohtet: 500 mb ရှိတယ့် file ကို win rar နဲ့ file5file ရအောင်compressလုပနီးလေးပြောပြပါလား? ဒီအကြောင်းကို အားလုံးသိမယ်ထင်ပြီးတော့ မရေးတာပါ . အခု မေးလာတဲ့သူရှိလို့ ကျွန်တော် ရေးပေးပါ့မယ် .
အခုပထမဦးဆုံး win rar မရှိသူများ ဒီမှာ သွားပြီး Download လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်ဗျာ .. အရင်က ကျွန်တော် တင်ထားပေးသားပြီးသားပါ .
(1) Download လုပ်ပြီးသွားတာနဲ့ . ကိုခွဲချင်တဲ့ ဖိုင်ကို right click ထောက်ပြီး ပုံမှာပြထားသလို Add to archive ကိုရွေးလိုက်ပါ .
(၂) ကိုခွဲချင်တဲ့ file ပမာဏကို ပုံ(၂)မှာပြထားသလို ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ ..
(၃) password ခံထားချင်ရင်တော့ ပုံ(၃)မှာလို advanced >> set password ကိုနှိပ်ပြီး ကိုထားချင်တဲ့ password ကို ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါ .. ပြီးရင် ok ကိုနှိပ်လိုက်ပါ
(၄) ပြီးရင် ပုံ(၄)မှာပြထားသလို သူဖိုင်တွေကို စပြီး ခွဲနေပါလိမ့်မယ် .
(၅) နောက်ဆုံးတော့ ပုံ(၅)မှာလို ခွဲထားပြီးသားဖိုင်တွေကို မြင်တွေ့ရမှာပါ ..
ပုံလေးတွေကို ကလစ်နှိပ်လိုက်ရင် ပုံအကြီးထွက်လာပါလိမ့်မယ် . Read More
နေနိူင်: အကိုရေ....windows myanmar translator လေးရှိရင် တင်ပေးပါလား??? Window myanmar translator အတွက် လိုချင်ရင်တော့ http://www.myanmarnlp.org.mm/ ကိုသွားလိုက်ပါ . သူမှာ တစ်ခါတည်း Download လုပ်လို့ရပါတယ် . အခမဲ့ Download လုပ်လို့ရပါတယ် . =x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=thu: dear bro! how can i get the window XP (home edition)..could u suggest me where can i get this? thx!Download Windows XP Media Center Edition From Rapidsharehttp://rapidshare.com/files/204537408/faXcooL12.ziphttp://rapidshare.com/files/204536933/faXcooL34.ziphttp://rapidshare.com/files/204537429/faXcooL56.ziphttp://rapidshare.com/files/204541455/faXcooL78.ziphttp://www.megaupload.com/?d=XQGFTGOJ(or)Download Windows XP Media Center Edition From Megauploadhttp://rapidshare.com/files/204537408/faXcooL12.ziphttp://www.megaupload.com/?d=3EQF6RW9http://www.megaupload.com/?d=YNXBNTIIhttp://www.megaupload.com/?d=OKXD4ORGhttp://www.megaupload.com/?d=XQGFTGOJDownload Microsoft Windows7Megauploadhttp://www.megaupload.com/?d=TY8RKA6Ihttp://www.megaupload.com/?d=XCNG5SIOhttp://www.megaupload.com/?d=3QBOPFSW
မနေ့ကတုန်းက ဘာဖြစ်လို့ online ၀င်မလာတာလဲဆိုရင် brother တစ်ယောက်က iphone လုပ်ခိုင်းနေလို့ ဦးနှောက်ပါစားသွားတယ် . အခုတော့လဲ အဆင်ပြေသွားပါပြီ .. iphone တွေကို Unlock and jailbreak လုပ်ဖို့အတွက် ပြင်ဆင်နေတာနဲ့တင် အချိန်ကုန်သွားတာ . လုပ်ပုံလုပ်နည်းကိုလဲ ကျွန်တော် post တင်ပေးပါဦးမယ် . နဲနဲတော့ စားတယ်ဗျ . ဒါပေမယ့် လွယ်ပါတယ် . အဓိကက ပါဝါပိတ်ပြီး ပြန်ဖွင့်တဲ့အချိန်လေးမှာပဲ နဲနဲလေးလိုတာ . unlock ဖြေနည်းကတော့ ၃ - ၄ မျိုးလောက်ရှိပါတယ် . ဘာ့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ jailbreak လုပ်သလဲဆိုရင် တစ်ကယ်ဆိုရင် apple က ပေးတဲ့ Game တွေကို မ၀ယ်နိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် . ကိုဝယ်ခဲ့တဲ့ iphone ကို SIM card ထည့်ပြီးသုံးချင်တဲ့ အခါမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ကြတာပါ . jailbreak လုပ်ခြင်းအားဖြင့် apple မဟုတ်တဲ့ တစ်ခြားသူတွေရေးထားတဲ့ Game တွေကို အခမဲ့ Download လုပ်နိုင်ပါတယ် . စိတ်ဝင်စားတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် ရေးပေးပါ့မယ် . အဆင်မပြေခင်တုန်းကတော့ ပထမဦးဆုံး လုပ်တာဆိုတော့ လက်တွေပါတုန်တယ် . တစ်ခုခုများဖြစ်သွားရင် ဆိုပြီးတော့ပေါ့ . အခုတော့လဲ အဆင်ပြေသွားပါပြီ . အားလုံးကို ကျေးဇူးတွေအများကြီးတင်ပါတယ် .အခုဖိုင်တွေတင်လိုက်ပါဦးမယ် . အားလုံးအတွက် အဆင်ပြေမှာပါ ... Read More
ဒါကတော့ ညီလေးတစ်ယောက်မေးထားလို့ပါ .. ပထမဦးဆုံး အောက်ကပေးထားတဲ့ဖိုင်ကို download လုပ်လိုက်ပြီး . ဖိုင်ကို ဖြေထားပေးပါ .Download ifile.it ၊ Download mediafireအောက်ကပုံထဲကအတိုင်း ဖိုင် ၃ ဖိုင်ကို တွေ့ရမှာပါ .အိုကေတယ်ဆိုရင် အောက်က အဆင့်အတိုင်းဆက်လုပ်လိုက်ပါ .- Start >>> Run ကိုဖွင့်ပါ။ (Windows Key + R)- regedit လို့ရိုက်ပြီး OK ကိုနှိပ်ပါ .- ပေါ်လာတဲ့ Registry Editor ၀င်းဒိုးမှာ File -> Import... ကိုရွေးလိုက်ပါ .- Import Registry File ကနေ အပေါ်က download လုပ်ပြီး ဖြေထားတဲ့ Make Genuine ဆိုတာကိုရွေးပြီး ok ပေးလိုက်ပါ .- လုပ်ဆောင်ချက်အောင်မြင်ကြောင်း box ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် .- အခုလုပ်လိုက်တာ အောင်မြင်လား မအောင်မြင်လားဆိုတာကို Download လုပ်ထားတုန်းက ပါလာတဲ့ Microsoft Genuie Advantage ဆိုတဲ့ Tool နဲ့ စမ်းကြည့်လိုက်လို့ရပါတယ် .- လုပ်ဆောင်ချက်အောင်မြင်ရင် အစိမ်းရောင်စာသားကို မြင်ရပါမယ် . မအောင်မြင်ရင်တော့ အနီရောင်စာသားကိုပဲမြင်ရမှာပါ .
ဒီနေ့ နေတော်တော်ကောင်းသွားလို့ ကျွန်တော် ပို့စ်တစ်ခုရေးပါ့မယ် . သိပြီးသားလဲ ဖြစ်ချင်ရင်ဖြစ်မှာပါ ..ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ gmail ကို http://gmail.com ထဲကို မ၀င်ပဲနဲ့ . တစ်ခါတည်း ကွန်ပျူတာထဲကို ရောက်အောင် ချိတ်ဆက်တဲ့နည်းလေးပါ . တစ်ခြားသူတွေ သုံးနေတာလဲ မြင်ဖူးချင်မြင်ဖူးမှာပါ .. အဲ့ဒါကတော့ Microsoft ကနေ ပြုလုပ်ထားတဲ့ Outlook express ကို အသုံးပြုနည်းပါ . အခုကျွန်တော်က gmail နဲ့ ချိတ်ပြပါ့မယ် . လွယ်ပါတယ် . တစ်ဆင့်ချင်းသာ လုပ်သွားပါ . အဆင်ပြေသွားမှာပါ ..(၁) Outlook သို့မဟုတ် Outlook Express ကိုဖွင့်လိုက်ပါ .(၂) Menu ကနေ Tool >> Accounts ကို နှိပ်လိုက်ပါ ..(၃) Add ကို နှိပ်ပြီး Mail ကို ရွေးလိုက်ပါ ...(၄) Display name မှာ ကို ကြိုက်နှစ်သက်ရာကို ရိုက်ထည့်ပြီး Next ကို နှိပ်လိုက်ပါ ..(၅) Incoming mail (POP3, IMAP or HTTP) နေရာမှာ pop.gmail.com လိုရိုက်ထည့်ပြီး Outgoing mail (SMTP) server ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ smtp.gmail.com ဆိုတာကို ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ ..(၈) Next ကိုနှိပ်ပါ .(၉) ကိုအသုံးပြုမယ့် gmail ရဲ့ username နဲ့ password ကို ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ .(၁၀) ပြီးတာနဲ့ Finish ကိုနှိပ်လိုက်ပါ ...(၁၁) ပြီးရင် အောက်ကပုံထဲမှာပြထားသလို pop.gmail.com လေးကို Highlight ပေးထားပြီး properties ကို ရွေးလိုက်ပါ ...(၁၂) ပြီးရင် Advanced ကို ရွေးပြီး This server requiresasecure connection (SSL) စာသား ကို အမှန်ခြစ်ပေးထားပြီး သူ့အပေါ်က Outgoing Mail (SMTP) ဆိုတဲ့နေရာမှာ 465 ကို ဖြည့်ပေးလိုက်ပါ ..(၁၃) This server requiresasecure connection (SSL)ကို အမှန်ခြစ်ပေးထားပြီး Incoming mail (POP3)မှာ 995 ကိုဖြည့်ပေးလိုက်ပါ .(၁၄) ပြီးတာနဲ့ ကိုဖြည့်ထားတာ မှန်ရဲ့လားဆိုတာကို server ကို သေချာပြန်စစ်ဆေးလိုက်ပါ . မသေချာရင် password နေရာမှာ ပြန်ရိုက်လိုက်ပါ .(၁၅) My server requires authentication ဆိုတာ ကို အမှန်ခြစ်ပေးပြီးတာနဲ့ ok ကို နှိပ်လိုက်ပါ .မေးလ်ဝင်လားမ၀င်လားဆိုတာ send/receive ကို နှိပ်လိုက်ပါ . မေးလ်တွေဝင်လာပါလိမ့်မယ် .ကဲအားလုံးပြီးဆုံးသွားပါပြီ . အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ ...
mg soe: ဒေါင်းလို့ရတယ် ဖိုင်ဖြေတော့ 0k.b ဘဲပြနေတယ် လင့်တွေကိုအကုန်လုပ်ကြည့် အဲဒီအတိုင်ဘဲ ဖြစ်နေတယ် ပြောပြပါအုံးကိုမောင်စိုးရေ အစ်ကို့ ကွန်ပျူတာထဲမှာ 0k.bat ဆိုတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ဝင်နေတာပါ . ကျွန်တော်တင်ထားပေးတာ အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ် . ကျန်တဲ့သူတွေလဲသုံးနေကြတာပါပဲ .. အဲ့ဒီ့ဗိုင်းရပ်စ်ကို ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာကို ဒီမှာ ဖတ်လိုက်ပါ .. တစ်ယောက်ယောက်က လက်တည့်စမ်းပြီး အစ်ကို့ဆီကို ပို့လိုက်တာနေမယ်နဲ့တူပါတယ် . အဲ့မယ် ဗိုင်းရပ် လုပ်နည်း နည်းလမ်း(၃)သွယ်ကို ရေးပြထားပေးပါတယ် .တစ်ကယ်တော့ ဗိုင်းရပ်စ်ဆိုတာ မလုပ်သင့်တဲ့ အရာပါ . ကွန်ပျူတာအကြောင်း အတော်အတန် သိတဲ့ သူတွေအတွက် သတ်နည်းနဲ့ ဖယ်ရှားနည်းတွေကို လိုက်ရှာဖတ်ပြီး လုပ်လို့ရပေမယ့် . လုံးဝအစိမ်းသက်သက် ဘာမှ နားမလည်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ တစ်ကယ့်ကို စိတ်ညစ်စရာ သောကရောက်စရာပါ . အဲ့ဒါကြောင့် လက်တည့်မစမ်းစေလိုပါဘူး . ဗိုင်းရပ်စ်ပြုလုပ်တဲ့ program program တွေကတော့ အများကြီးရှိပါတယ် . ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် အားမပေးပါဘူး .. ကိုက အပျော်သဘောလုပ်ပေမယ့် တစ်ဖက်သားကို အရမ်းသောက ရောက်စေပါတယ် .
ဒီစာအုပ်ကတော့ သံလုံငယ် ရေးထားတဲ့ စာအုပ်လေးပါ . တစ်ခါတည်း ပေါင်းစည်းမိသွားအောင်လို့ ကျွန်တော်တင်ပေး လိုက်တာပါ .. Photoshop ကိုလဲ လေ့လာပါ . အခုပေးလိုက်တဲ့ Photo impact ကိုလဲ လေ့လာပါ . software တိုင်းမှာ လုပ်ငန်းချင်းတူညီကြပေမယ့် . အမြဲတမ်း အားနည်းချက် အားသာချက်ဆိုတာ ရှိပါတယ် ....
Download ifile.it ၊ Download mediaifre ၊ Download rapidshare ၊ Download 4shared ၊ Download megaupload Read More
မောင်ဇော်မင်းအောင်: အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် Linux Ubuntu အကြောင်းမြန်မာ မာလို beginer တွေအတွက်ရေးထားတာလေးမျှပေးပါလားခင်ဗျာ
ဗဟုသုတအနေနဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် .. ပုဂံနက် အိုင်ပီ ချိတ်ဆက်နည်းကို ပုံတွေနဲ့ ရှင်းပြထားတဲ့ စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ် . Download ifile.it ၊ Download megaupload ၊ Download mediafire ၊ Download rapidshare ၊ Download 4shared
CSS အကြောင်းကို မြန်မာလို ရေးထားတာပါ .. ၀ဘ်ဆိုက်ရေးတဲ့သူတိုင်း css တို့ html တို့နဲ့ မကင်းကြပါဘူး .. ကိုစေတန်ရေးထားတဲ့စာအုပ်လေးပါ .. သူတို့ကို သိမှ ဆိုက်ကို ကိုင်တွယ်ရတာ လွယ်ကူသလို ၀ဘ်ဆိုက်တစ်ခု လှပဖို့လဲ လွယ်ကူတာပါ . Download ifile.it ၊ Download megaupload ၊ Download mediafire ၊ Download rapidshare ၊ Downlod 4shared
Aung Myint (M.E.,Australia) ရေးတဲ့ C++ programming စာအုပ်ပါ . volume (3) ပါ ဒီစာအုပ်လေးကတော့ programming အကြောင်းကို စိတ်ဝင်စားပါတယ်ဆိုတဲ့ ညီအစ်ကိုများအတွက်ပါ .. တစ်ခုသတိပေးလိုက်ချင်ပါတယ် . အခုတစ်လော ifile ကြီး ချောင်းဆိုးနေပါတယ် . သူနဲ့ဒေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့ လေးဖြူသီချင်းလို နားနားပြီးမှ Download ပါ .. Download mediafire ၊ Download ifile.it ၊ Download rapidshare ၊ Download 4shared ၊ Download megaupload
Download ifile.it ၊ Download megaupload ၊ Download mediafire ၊ Download rapidshare ၊ Download 4shared ၊ Read More
Microsoft word 2002 စာအုပ်လေးပါ . မြန်မာလိုပဲ ရှင်းပြထားတာပါ . အတော်ကောင်းပါတယ် . စာရင်း ဇယားများနှင့် မကင်းသူများ Download ဆွဲကြပါ . လင့်တွေကတော့ တော်တော်များတယ်နော် . အဆင်ပြေတဲ့ လင့်ကသာ ဒေါင်းကြဗျာ . Download ifile.it ၊ Download megaupload ၊ Download mediafire ၊ Download rapidshare ၊ Download 4shared Read More
Zippyshare | Solidfiles | Filecloud | Ziddu | Sharebeast | Tusfiles | Mirrorcreator Read More